U Beddel Badbaadinta 2GB Faylka PST ee Foomka Muuqaalka 2003 - Tilmaam Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair U badal Feejignaanta 2GB Faylka PST ee Foomka Muuqaalka 2003
Isticmaalka DataNumen Outlook Repair si loogu Badalo Badbaadinta 2GB Faylka PST ee Foomka Muuqaalka 2003
0.01 / 5 (laga bilaabo 1,595 cod)
Xusuusin: Waa inaad haysataa Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo lagu rakibay si aad u isticmaasho habka ku yaal hagahan.
Markii aad la kulanto Faylka guud ee Muuqaalka PST (Faylka PST wuxuu la mid yahay ama ka weyn yahay 2GB) kumana furi karo si guul leh Microsoft Outlook 2002 ama noocyo hoose, waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Repair si loo baaro feylka, loo soo helo dhammaan xogta ku jirta, oo loogu keydiyo faylal cusub oo PST ah oo ku jira qaabka loo yaqaan 'Outlook 2003 unicode format' oo aan lahayn xaddiga cabbirka 2GB wixii intaa ka badan. Markaas waxaad isticmaali kartaa Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya si aad u furto faylka cusub ee PST oo aad u hesho dhammaan xogta iyada oo aan wax dhibaato ah qabin.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan beddelin faylka PST-ka ee weyn DataNumen Outlook Repair, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara faylka PST.
Maaddaama faylka PST uu aad u ballaadhan yahay, waa inuu ku jiraa qaabka Muuqaalka 97-2002. Sidaa darteed, fadlan ku caddee faylkiisa qaabkiisa "Muuqaalka 97-2002" sanduuqa combo agteeda sanduuqa wax ka beddelka faylka. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Repair wuxuu baari doonaa isha weyn ee faylka PST si loo ogaado qaabkeeda si otomaatig ah. Hase yeeshe, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah.
Marka la eego, DataNumen Outlook Repair waxay keydineysaa xogta lasoo helay fayl PST cusub oo go'an oo loogu magac daray xxxx_fixed.pst, halkaas oo xxxx uu yahay magaca isha PST. Tusaale ahaan, ilaha PST ee laga helo Outlook.pst, magaca asalka ah ee faylka go'an wuxuu noqonayaa Outlook_fixed.pst. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Maaddaama aan dooneyno inaan u beddelno feylka weyn ee PST fekerka qaabka 'Outlook 2003', waa inaan ku xulanno qaabka faylka PST-ga go'an "Outlook 2003-2010" sanduuqa combo. agteeda sanduuqa wax ka beddelka faylka. Haddii aad u dejiso qaabka "Outlook 97-2002" ama "Auto Determined", markaa DataNumen Outlook Repair waxaa laga yaabaa inuu ku guuldareysto inuu ka baaraandego oo u beddelo faylkaaga weyn ee PST.
Fadlan ogow waa inaad haysataa Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo la rakibey, haddii kale geedi socodka beddelidda oo dhami way fashilmi doontaa
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Repair doonaa start iskaanka iyo badalida ilaha faylka PST ee aadka u weyn. Bar horumarka
Hawsha ka dib, haddii ilaha weyn ee faylka PST la soo celin karo loona rogi karo feylka cusub ee Muuqaalka 2003 PST si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furi kartaa faylka cusub ee PST-ga ah Microsoft Outlook 2003 ama noocyo ka sarreeya. Oo waxaad ka heli doontaa dhammaan walxaha faylka weyn ee faylka PST lagu soo kabsaday midka cusub.
Faylka cusub ee go'an ee PST, waxa ku jira farriimaha iyo lifaaqyada waxaa lagu beddeli doonaa macluumaad demo. Fadlan dalbo nooca oo buuxa si loo helo waxyaabaha dhabta ah ee la beddelay.
U badal Feejignaanta 2GB Faylka PST ee Foomka Muuqaalka 2003